Flashbacks နှင့်တဏှာနှင့်အတူဖြေရှင်းဘို့အပိုဆောင်း Techniques
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏ပြင်းထန်သောဆန္ဒများသို့မဟုတ်တပ်မက်မှုများကိုရုပ်ပုံကိုမဖွဲ့စည်းမီရုပ်ဖျက်ခြင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်၍ စွမ်းအင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ရုပ်ပုံ (သို့) စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအရှိန်အဟုန်မရရှိခြင်းအားတားဆီးခြင်းသည်ပြtroubleနာများစွာနှင့်မလိုအပ်သောနာကျင်မှုနှင့်ရုန်းကန်မှုများစွာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဤတွင် Dr. David R. Hawkins မှရေးသားတင်ပြချက်ဖြစ်သည်။ X အနီရောင်ကြီးကြီးနှင့်ချက်ချင်းပေါ်လာသည်နှင့်ဤရုပ်ပုံကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ (ဒီဟာကိုဘာလဲ“ DVD ဆိုတာကကူးယူထားတယ်”)
သင့်စိတ်ထဲတွင်ရုပ်ပုံတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်လိုသောဆန္ဒသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျဤဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လျှင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးတပ်မက်မည်သည့်, ဒါမှမဟုတ်သင်တစ် ဦး အရက်, သောက်လျှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, က cheeseburger, ဟမ်ဘာဂါ, အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေ, ပုံရိပ်အဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောက်စရာ၏ပုံရိပ်ထွက်လာသည်။ သင်သည်၎င်းကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည် (ပုံတွင်ပါသောအနီရောင် X ကြီးကြီးမားမားကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
ပုံကစွမ်းအင်ကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ၅ ၀ ဝပ်လောက်ပဲရှိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ပထမစက္ကန့်အတွင်းဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုလျှင်၎င်းသည် ၁၅၀ ဝပ်၊ ၆၀၀ ဝပ်ရှိပြီး၎င်းသည်“ to” ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပုံကိုပြတ်တောက်စေခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကိုပြတ်တောက်နိုင်သည်။ အားလုံးကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်သင်တစ်စုံတစ်ခု၊ cheeseburger သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုကြည့်ရင်တောင် cheeseburger မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာချက်ချင်းပဲမင်းစိတ်ထဲမှာဒိန်ခဲဘာဂါတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လာပြီးအဲဒါကသင်တမ်းတနေတာပါပဲ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်အလွန်မြန်ဆန်စွာနှင့်တပ်မက်မှု၏အရာဝတ္ထုသည်သင်၏သတိတွင်ပေါ်လာပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်မှုပြုရမည်။
ငါသောက်မယ့်ပုံရိပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့မင်းကစက္ကန့် ၁-၂ လောက်လောက်အရက်ရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြောတယ်။ ၁၁ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူသည်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီး Martini ၏ပုံသဏ္mindာန်ကိုသတိရလာသည်။ ဘရားသို့သွားပြီး ၁၃-၁၄ နောက်ပိုင်းတွင်သတိမရှိဘဲလမ်းလျှောက်သွားခဲ့သည်။ နှစ်တစ်နှစ်ခန့်လေးလေးနက်နက်ကျိန်းသေသူပြန်ပြန်လာပြီးအရက်မူးလာသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စက္ကန့်တွင် AA စာအုပ်တွင်သင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အစောပိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပြန်ပြောပြသည့်၊ ထိုနေရာတွင်ပင်မာတီနီ၏ပုံရိပ်သည်ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည်၊ သူသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုရသောအခါသူသည် Martini ကိုချက်ချင်းမဖယ်ရှားနိုင်ဘဲသူသည်ဘားသို့အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပြီး ၁၄ နှစ်sobန္ဒြေရှိမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူသတိရှိရှိမရွေးဘဲ, သူ၌ (ရုပ်ပုံကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသိရန်) ဝိညာဏ်နည်းစနစ်၊
လွန်ခဲ့သောလေးပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် porn အကြောင်းလုံးဝစိတ်ကူး။ မရ။ ငါ့မှာကောင်းမွန်တဲ့နည်းစနစ်ရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ flashback ကကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝင်လာတိုင်း X-mark အနီရောင်ကြီးတစ်ခုကကျွန်တော့်အမြင်ထဲဝင်လာတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်အသံကျယ်တဲ့လူနာတင်ယာဉ်အမြန်မောင်းလို့ကျွန်မထင်တယ်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကဆက်လက်တွန်းအားပေးနေပါကကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်မိသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်မည်သည့် dopamine အလျင်အမြန်ပေါက်ဖွားမှုမှမရှိသေးပါ။ သော့ချက်မြန်မြန်ဖြစ်ရန်နှင့်ငါ technique ကိုအချိန်အတွက်ပိုပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်လာယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အနီရောင် X သည်ရော်ဘာတံဆိပ်တုံးဖြစ်ပြီး“ Ehh Eh!” ၏အသံကိုပြုလုပ်သည်။ - "မိသားစု Fortunes" တီဗွီအစီအစဉ်တွင်မှားယွင်းသောအဖြေတစ်ခုပေးသောအသံ။
ကျွန်ုပ်မှားသည်မှာညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများ (သို့) ဝတ်လစ်စလစ်မိန်းကလေးများ၏ပုံရိပ်များသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအခါ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်မကြိုးစားမီကျွန်ုပ်သူတို့ကိုဖျော်ဖြေပေးလိမ့်မည်။ မနေ့ကငါဖတ်ဖူးတဲ့စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့မီးသီးတွေကမီးသီးလိုပါပဲ တစ်စက္ကန့်တွင်ကြာအောင်ပြုလုပ်သောအရာများသည် ၅ ဝပ်၊ ၂ စက္ကန့်သည် ၆၀ ဝပ်နှင့်ဒုတိယသုံးခုမှာ ၆၀၀ ဝပ်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်နိုင်လေ၊ ဒါကြောင့်ငါဒီအနီရောင် X နည်းလမ်းကိုယနေ့ငါအသုံးပြုနေသည်။ ပုံပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အနီရောင် X ကိုအနက်ရောင်နောက်ခံဖြင့်ပစ်ချလိုက်သည်။ တကယ်တော့သူကပိုပိုပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်လာတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုမဖျော်ဖြေတဲ့အခါငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိသိသာသာပိုကောင်းလာတယ်။ သူတို့ကbrainရာမ ဦး နှောက်ပဟေersိသမားတွေနဲ့တူတယ်။
အနီရောင် X သင့်ရဲ့လမ်းကိုလုပ်ပါ
ငါ technique ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ရသည်။ ငါ X အနီရောင်ကိုသုံးပြီးတိုင်းနောက်ကွယ်ရှိပုံသည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အခုငါ့ရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကိုငါ့အနီရောင် X ကို“ တည်ဆောက်” ဖို့ငါအာရုံစိုက်လိုက်တယ်။ အရောင်ဆိုတာဘာလဲ။ အရိပ်ကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးပါ။ အနီရောင်၊ အနီရောင်၊ သွေးနီလား? ငါကအခြို့သောအတိမ်အနက်နှင့်အတူကပုံဖော်။ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် သူကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ကျောဘက်မှာရှိတယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ထင်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် visualization လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလွန်ပါ ၀ င်လာပြီး PMO ၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါလိုအပ်တဲ့အခါအနီရောင် 'X' ကိုခေါ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ကျွန်ုပ်၏အနီရောင် X တွင်နောက်ခံအနက်ရောင်ရှိပြီးမည်သည့်ပုံမျှမဖြတ်နိုင်ပါ။ ရီစရာအသံပေမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ် သတ္တုတွင်းသည်ကျွန်ုပ်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော 'Xenogears' ဗီဒီယိုဂိမ်းခေါင်းစဉ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ X ကုမ္ပဏီကြီးနှင့်ဆင်တူသည် (google image search ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ) ။ ငါမစီစဉ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ X တစ်ခုပဲ။ ဟားဟား။ သင်သည်သွေးဆောင်မှုကိုမခံစားရသည့်အချိန်များတွင်အနီရောင် X ကိုမြင်ယောင်စေရန်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်ကြောင်းလမ်းပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ Plus အား, ငါ့အနီရောင် X ကိုပိတ်ပစ် slamming ကြီးမားတဲ့သတ္တုတံခါး၏အသံလည်းပါဝင်သည်! တကယ်တော့ငါ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်တာ သင်၏တပ်မက်မှုအားပိတ်ဆို့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောသင်၏ကိုယ်ပိုင်“ တိုးမြှင့်မှုများ” ကိုသင်ထည့်ချင်သည်။
လိင်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ကူးယဉ် / အတှေးအချေါအဘယ်သူမျှမ
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းမဟုတ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်း / ကစားခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါ reboot အရှိန်မြင့်လာသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည် ငါကအမြဲတမ်းလိင်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးအဲဒါဟာသဘာဝဖြစ်စဉ်လို့ထင်ခဲ့လို့ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအမြဲတမ်းနှိုးဆွဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့လို့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့တသမတ်တည်းချဉ်းကပ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် 'Stop' ဆိုင်းဘုတ်သို့မဟုတ်အနီရောင်အရောင်ကဲ့သို့သောလိင်စိတ်ကူးယဉ်အတွေးအခေါ်ထဲသို့လျှောကျသွားသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောပုံရိပ်များဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအလုပ်လုပ်သည်။ မှတ်ဉာဏ်သို့ seared ခဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအမှေးမှိန်ပါပြီ။
၁ နှစ် + - အောင်မြင်မှုအတွက်အာမခံချက်ပေးသောရိုးရှင်းသောအစွန်အဖျား (အစပျိုးမှုနှင့်တဏှာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍“ သုညသည်းခံမှုမူဝါဒ” ၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးစွာသောပို့စ်တစ်ခု။ )
သင့်ရဲ့ Self-စည်းကမ်း Build
ငါ (ပုံမှန်အားဖြင့်ညနက်ပိုင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်း၊ ငါ့အိပ်ခန်း၊ လက်တော့နှင့်အင်တာနက်၊ iphone နှင့်တုန်ခါမှုတို့နှင့်အတူ) အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုများတွင်ပုံမှန်စာရိုက်ခြင်းစတင်သည်။ သတိပြုပါ၊ “ enter” ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်စွာခံစားခဲ့ရပေမယ့်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီ browser ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ X ခလုတ်ကကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။ စာမျက်နှာကိုတောင်မဖွင့်ခင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ အနီးအနားမှာချောကလက်ပတ်ပတ်လည်နဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် i-Phone, ကလေးကိုကြွက် ဦး နှောက်ကိုအားဖြည့်ပေးဖို့ bouncer ကအရက်မူးကလပ်ကဲ့သို့ပြုပြီးကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်ထဲမှာချောကလက်ကိုပစ်ချသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကားကိုလိုက်ပို့ပါ။ ငါအနည်းဆုံးနေ့စဉ်ထိုသို့ပြု။ မမျှော်လင့်ဘဲတပ်မက်ထိမိသောအခါလည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယခုအချိန်အထိ PMO ကိုလုံးဝမစဉ်းစားရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီဒီမဟာဗျူဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင်၏စိတ်ထဲမှအတွေးတစ်ခုကိုရိုးရှင်းစွာဖျက်ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာသင်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု (PMO) နှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းသည်သင်၏လုပ်ဆောင်မှု (PMO) သည်အလိုရှိသည်ဟုသင့်အား ဦး နှောက်အားသတိပေးသည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာ။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏အာရုံကြောသိပ္ပံပါမောက္ခသည် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းချုပ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းဟောပြောချက်ပေးခဲ့သည်။ သူကမလိုလားအပ်သောအပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်ထိရောက်သောနည်းမှာထိုအပြုအမူအားသင်၏ရည်မှန်းချက်အပေါ် မူတည်၍ အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒါကကျွန်တော့်ကိုလက်ရှိ ၈ ရက်ကြာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ငါလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာ nofap ရဲ့အလွယ်ကူဆုံး ၈ ရက်။ ကျွန်ုပ်မဟာဗျူဟာမှာဤသို့ဖြစ်သည်။ PMO ၏အတွေးတစ်ချောင်းငါခေါင်းထဲသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ခြေဆွံ့နေသည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်နေသည်ကိုချက်ချင်းမြင်ယောင်မိသည်။ ဒီလိုလုပ်ပြီး ၈ ရက်အကြာမှာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဟာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောမည့်အစား၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုကြည့်ခြင်းဟူသောအတွေးသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲ ၀ င်လာတိုင်း၊ ငါဘာကြောင့်ငရဲလိုချင်တာလဲ အလိုရှိ ငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ” ယောက်ျားတွေဒီဟာကိုစမ်းကြည့်စမ်းပါ ဦး ။
အဆိုပါ Porn Trap သင်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲကြုံတွေ့ရပါက“ မျက်စိတုန်ခြင်း” ကိုအကြံပြုသည်။ “အိုး, BOUNCE မှာ sexy မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သင်လုပ်လေလေ၊ နောက်ဆုံးတော့ဝေးဝေးကိုကြည့်လိုက်တာဟာအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာတဏှာဖယ်ရှားပေးပါသည်။
'Red X' နည်းစနစ်နှင့်ဆင်တူပြီး 'Rubber Band' နည်းသည်အလားတူကူညီနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုပတ်ပြီးရော်ဘာကြိုးတစ်ချောင်းကိုထားပါ။ သင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအတွေး (သို့) စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုစတင်ဖျော်ဖြေသည့်အခါတိုင်းနာကျင်မှုခံစားရရန်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ရှိရာဘာကြိုးကိုချည်ထားပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကျိုးကျေးဇူးလျော့နည်းခြင်းမရှိဟုယူဆစေနိုင်သည်။
Red X အသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမကြိုက်ခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စက်ရုပ်မျိုးဟုထင်ပြီး၎င်းကိုအသုံးချသောအခါအဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ဒီတော့အနီရောင် X ကိုသုံးမယ့်အစားကိုယ့်ကိုယ်ကို“ Fuck the shit” လို့ပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းပေါ်လာတာနဲ့။ ဒါဟာငါ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်ပုံပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်လိုသည်။ သင်ပင် porn ကိုကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရတူညီတဲ့အခိုက်။ သင်ဆင်ခြေမချခင်သင်လုပ်ရလိမ့်မည်။ “ Fuck the shit” လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မင်းအရင်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ စမ်းကြည့်ပါ ဦး
ဦး ခေါင်း၌ပုံများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုရရှိသောအခါကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောမြင်ကွင်းမှာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်မီးရှို့ထားသောပုံကိုတပ်မက်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်သည်။ စက္ကူဖျက်စက်ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားသည်၊ ပစ်ချ ငါတွေးမိတာကငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တောင်မှကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုအဲဒီရုပ်တုတွေအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သလိုခံစားရတယ်။ ”
မင်းမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းသိထားသင့်တယ်။ မင်း ဦး နှောက်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းကအပြစ်တင်ဖို့ပဲ။ သင်ကသူ၏ကန့်သတ်သောအချိန်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအားသာချက်ယူလျှင်လောကကိုကတိပေးသည်။ သင်တိုက်တွန်းခံရသည့်အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုမည်မျှကောင်းမည်ကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ အဲဒီအစား P နဲ့ M ကိုစိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ လူတစ်ယောက်စားနေတဲ့ဝက်ဝံ၊ အခုမကြာသေးခင်ကသင်မုန်းတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ရွံစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုခင်ဗျားမြင်ခဲ့သမျှကိုပေါင်းသင်းပါ။ သင့်စိတ်ထဲမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဖန်တီးမှုရှိပါ။ သင့်တွင် P ကြယ်တစ်လုံးအတွက်ဤအရာရှိနေပြီးပိုးတောင်မာ (အင်းဆက်ပိုး) ကိုမုန်းသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီမှသို့မဟုတ်သူ၏ပါးစပ်ထဲမှတွားသွားနေသောပိုးတောင်မာများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံကိုပုံဖော်ပါ။ ဒီနည်းပညာကိုဆက်လေ့ကျင့်ပါ”
[နောက်ထပ်ကောင်လေး]“ ဒီပုံကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ပုံကကပ်နေတယ်၊ ​​ဒီအသံကနေဖျားနေတယ်ဆိုရင်တော့ခလုတ်ထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့လူတွေအပေါ်အသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ကနေတစ်ခုခုလိုပုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကခလုတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုထက်လျင်မြန်စွာမနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေးများဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ ”
[နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်]“ သူကသူမကိုနှာခေါင်းထိုးတာ၊ အော့အန်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ သူတို့ထဲကအနည်းဆုံးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်နိုင်သည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စွဲမက်စရာကောင်းသောအရာကိုအမြဲတမ်းမသတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်စိတ်မ ၀ င်စားစေရန်၎င်းသည်အစွန်းကိုချွတ်စေသည်။ စိုးရိမ်စရာကတကယ်တော့အမြင်အာရုံ (သို့) Flashback စွမ်းအားပေးပုံရတယ်။ ”
ငါငြိမ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်ပုံတစ်ပုံကိုမြင်သောအခါငါစိတ်ကူးယဉ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရုပ်မြင်သံကြားငြိမ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအလွတ်ရာဖြစ်၏။ အခါတိုင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းဇာတ်လမ်းပေါ်လာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်သော, ရုံညစ်ညမ်းပုံရိပ် / Video ကျော်ငြိမ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဆိုပါငြိမ်လုံးဝကျော်မကြာစိတ်ကူးဖို့ကြိုးစားပါ။ ငါတောင်မှအခါအားလျော်စွာနှောင့်အယှက် Buzz သည်အသံထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တကယ့်ကူညီပေးသည်။
သို့မဟုတ် ... အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှ
ငါအနီရောင် X နည်းစနစ်ကိုသုံးပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအထိရောက်ဆုံးလားမသိဘူး။ ငါ (စဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၌ပြုသကဲ့သို့) အလွန်အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ, "ညင်ညင်သာသာအတွေးများကိုဘေးဖယ်တွန်း" ရုံ (ငါ့အဘို့) ပိုကောင်းထိရောက်သောသူတို့ကိုဂရပ်ဖစ်လမ်းအတွက်သူတို့ကို "X" နှင့်အတူပိတ်ဆို့ဖို့ထက်ပိုမိုထိရောက်သောထင်, သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု။ ဒီတစ်ခါလည်းအေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေဖို့စဉ်းစားတာကပိုကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအတွေးတွေနဲ့ရုပ်ပုံတွေရဲ့စွမ်းအားကစက္ကန့်တိုင်းမှာအများကြီးပိုများလာတယ်၊ အဲဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်တယ်ဆိုတာငါသဘောတူတယ် စောစော.
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် အဆိုပါအမှန်တရား, ဤတိုက်ပွဲ Won မရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအ rewiring နည်းစနစ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.